Environment -- Financial Gazette, Harare - allAfrica.com
Zimbabwe: Company Seeks to Set Up Three 100MW Solar Power Plants
The Zimbabwe Power Company (ZPC) has applied to set up three solar power plants in the country, in a move aimed at improving electricity supply. Read more »
A worsening foreign currency crisis has armed safari operators with the ammunition they desperately needed to build a case for reintroduction of the bow hunting sport in Zimbabwe. Read more »
Zimbabwe: Municipality to Hike Water Tariff
A council proposal to commericalise water and sanitation services in the dormitory town could result in a 118 percent hike in water tariffs. Read more »
Zimbabwe: 'Vast Irrigable Land Available This Year'
ESTIMATES from the Zimbabwe National Water Authority (ZINWA) show that the country has a potential to irrigate at least 150 000 hectares of land this year. Read more »
CHINA Machinery Engineering Corporation (CMEC) has expressed interest in revamping Harare City Council (HCC)'s water reticulation system as part of efforts meant to end perennial… Read more »
Zimbabwe: Prepaid Water Meters Go National
THE Zimbabwe National Water Authority (ZINWA) is in the process of acquiring pre-paid smart water meters for a massive nationwide programme that will cover local authorities,… Read more »